China L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy naoty Parma (USP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: L-Lysine
Lysine (Abyséated Lys) dia iray amin'ireo fitambarana proteinina lehibe. Mila Lysine ny vatana izay iray amin'ireo asidra amine tena ilaina valo. Fa ny Lysine dia tsy azon'ny vatana foronina. Tsy maintsy omena amin'ny sakafo. Noho izany dia antsoina hoe "ny asidra amine ilaina voalohany" izy io. Amin'ny maha-agents mampitombo ny sakafo mahavelona azy dia afaka mampiakatra ny tahan'ny fampiasana proteinina i Lysine mba hahafahany manatsara ny sakafo ara-tsakafo. Izy io koa dia mahomby amin'ny fanatsarana ny fitomboana, ny fanitsiana ny fahazotoan-komana, ny fihenan'ny aretina ary ny fampatanjahana ny vatana. Izy io dia afaka manala endrika sy mitazona ny vaovao ao anaty sakafo am-pinina.
1) Ampiasaina amin'ny fanomanana ny fampidiran-dra ny asidra amine mitambatra ary ny fanaovana ny vokany ho tsara kokoa noho ny fampidiran-dra proteinina hydrolytic ary tsy dia ny voka-dratsy.
2) Azo amboarina ho famenon-tsakafo misy vitamina sy gliokose isan-karazany, mora entin'ny tsinay gastro aorian'ny am-bava.
3) Hatsarao ny fampisehoana zava-mahadomelina sasany ary hatsarao ny fahombiazany.
Ny lysine dia karazana asidra amine ilaina amin'ny olombelona. Izy io dia afaka manatsara ny fiasan'ny hematopoietika, ny tsiambaratelon'ny vavony, manatsara ny fahombiazan'ny proteinina, mampitombo ny fanoherana ny aretina, mitazona ny fifandanjana metabolika ary mankasitraka ny fitomboan'ny vatana sy ny saina.
1) Hatsarao ny kalitaon'ny hena ary ampitomboy ny isan-jaton'ny hena mahia
2) Hatsarao ny fahombiazan'ny proteinina fahana ary mampihena ny fihinanana proteinina tsy manara-penitra
3) Lysine dia mpampiana sakafo mahavelona amin'ny fiompiana biby sy vorona, fanoherana ny aretina, fanasitranana ny ratra, kalitaon'ny hena ary fanamafisana ny tsiambaratelon'ny vavony. Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny fampifangaroana ny nerve nerve, sela mikraoba, proteinina ary hemoglobin.
4) Aza miala amin'ny scour piglet, mampihena ny vidin'ny sakafo ary manatsara ny fiverenana ara-toekarena
Lysine dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana ny menaka manitra asidra sarotra ary mahatonga ny vokany ho tsara kokoa noho ny fanosotra proteinina hydrolytic ary tsy dia misy vokany ratsy. Izy io dia azo anaovana maso manatsara ny sakafo mahavelona miaraka amin'ny vitamina sy glucose isan-karazany, ary mora entin'ny tsinay gastro aorian'ny am-bava. Lysine koa dia afaka manatsara ny fampisehoana fanafody sasany sy ny fahombiazany.
famantarana mifanaraka mifanaraka
sahy miteny 98,5% ~ 101,5% 98,5% ~ 101,5%
Sarobidy PH 5.0 ~ 6.0 -
Fahaverezan'ny maina ≤0.4% ≤0.4%
Ajanona amin'ny fandrehitra ≤0.1% ≤0.1%
Chloride (as Cl) 19,0% ~ 19.6% 19,0% ~ 19.6%
Metaly mavesatra (toy ny Pb) ≤15ppm ≤15ppm
Vy (toy ny Fe) ≤30ppm ≤30ppm
Solifata (toy ny SO4) ≤0.03% ≤0.03%
Asidra amine hafa mifanaraka mifanaraka
Maloto miovaova ara-organika Fenoy ny fepetra takiana -
Fihodinana manokana + 20.4 ° ～ + 21.4 ° + 20.4 ° ～ + 21.4 °
Previous: L-Leucine CAS 61-90-5 ho an'ny sokajy Pharma (USP)
Manaraka: L-Methionine CAS 63-68-3 ho an'ny sokajy Pharma (USP)
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm, 73-32-5 L-Isoleucine, Farm kilasy L-Leucine, Sakafo biby, Kilasy Sakafo L-Threonine,